Ny vy vy sy fantsom-bary vita maloto dia ampiasaina amin'ny rafi-pipa mba hampifandraisana ireo faritra fantsona na fantsom-baravarana, mampifanaraka amin'ny habe na endriny samy hafa ary ho an'ny tanjona hafa, toy ny fandrindrana (na fandrefesana ny fikorianan'ny tsiranoka). Ny "plumbing" dia ampiasaina amin'ny famaritana ny fihanaky ny rano, ny entona, na ny fitrandrahana rano amin'ny tontolo iainana na varotra; "Fantson-tanana" dia matetika ampiasaina hamaritana ny fampidiran-drà (haingam-pandeha, avo lenta, hafanana be loatra na mampidi-doza) fitaovana amin'ny fangatahana manokana. Ny "fantson-drano" dia ampiasaina amin'ny fantsom-bolo mavesatra kokoa, indrindra fa ny fahaiza-manao ampy mba homena amin'ny endrika mifangaro.
Fittings vy maloto azo ampiasaina (indrindra fa ny karazana tsy mahazatra) dia mila vola, fotoana, fitaovana ary fitaovana apetraka, ary ampahany lehibe amin'ny rafi-pahefana sy ny fantsom-barotra. Valves ara-teknolojia kofehy, fa matetika dia niresaka manokana.
Azontsika betsaka io fanontaniana io avy amin'ny mpanjifa izay manandrana matetika hamantatra raha tokony hampiasa vy vy malemy alaina na vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy vita amin'ny vy izy ireo. Ny fantsom-by vy malemy mora kokoa dia mora kokoa amin'ny kilasy 150 # sy 300 # fanerena. Natao ho an'ny indostrialy maivana sy ny fampiasana plumbing hatramin'ny 300 psi izy ireo. Ny fantsom-baravarana sasany toy ny flange gorodona, taty aoriana, ny tee an-dalambe ary ny teatra amin'ny bullhead dia tsy mahazatra amin'ny vy vita.
Ny vy vy malemy dia manolotra fahana bebe kokoa izay matetika takiana amin'ny fampiasana indostrialy maivana. Ny fantsom-by vy malemy mora dia tsy tsara amin'ny famonosana (raha toa ka mila manantona azy ianao).